'अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी सेना क्रिसिमस पहिले फर्किनुपर्छ'
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानमा तैनाद अमेरिकी सेनालाई क्रिसमस पहिले नै स्वदेश फर्काइने बताएका छन् ।
कोभिड–१९ राहत प्याकेजबारे यसो भन्छन् ट्रम्प
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोभिड–१९ राहत प्याकेजका सम्बन्धमा डेमोक्रेटिक पार्टीसँग चुनाव अघिसम्म छलफल अन्त्य भएको घोषणा गरेका छन् ।
ट्रम्पलाई चुनावको चटारो, निको नुहँदै निबास फर्किए
एजेन्सी । कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अस्पतालबाट निवास फर्किएका छन् ।
लामो समयसम्म ट्रम्प बिरामी परिरहे भने राष्ट्रपति निर्वाचन के होला ?
एजेन्सी । अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनावका लागि मतदान हुन एक महिनाभन्दा पनि कम समय रहेको छ । पहिलो प्रेसिडेन्शियल डिबेटपछि भने अमेरिकामा आश्चर्य लाग्ने खबर पनि बाहिर आइरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्पलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । दुवै जनालाई व्हाइट हाउसका चिकित्सहरुले उनीहरुलाई निरिक्षण गरिरहेका छन् ।
कस्तो छ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको स्वास्थ्य अवस्था ?
एजेन्सी । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कोरोना संक्रमण भएको केही दिन भइसकेको छ । उनले सबैभन्दा पहिला आफ्नो एक सहयोगी कोरोना संक्रमित भएको खबर दिएका थिए ।
कसरी भइरहेको छ कोरोना संक्रमित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उपचार ?
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनकी श्रीमति मेलानिया ट्रम्प कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको खबर बाहिर आइसकेको छ । कोरोना संक्रमण भएपछि उनको कसरी उपचार भइराखेको छ यसबारे भने कमैलाई थाहा छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई एक प्रायोगिक एन्टीबडी ककटेल दिदैँ आइरहेको छ ।
कोरोना संक्रमित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अस्पतालबाटै काम गर्ने योजना
एजेन्सी । कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अस्पताल भर्ना भएका छन् । ज्वरो आउनेलगायतका कोरोनाका सामान्य लक्षणहरु देखिएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निजी सल्लाहकारलाई कोरोना संक्रमण
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निजी सल्लाहकारलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । निजी सल्लाहकारलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै ट्रम्प र उनकी पत्नी मेलानिया ट्रम्पले आफूलाई सेल्फ क्वारेन्टिनमा राखेका छन् ।
कुवेतका अमिर शेख
एजेन्सी । कुवेतका अमिर शेख सबाह अल अहमद अल सबाहको निधनप्रति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
एजेन्सी । अमेरिकामा आगामी नोभेम्बर महिनामा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि बुधबार पहिलो प्रत्यक्ष बहस भएको छ ।